Uma uthanda ukuba zihlale phezu kolwandle, futhi bajwayele induduzo, kodwa ungafuni ukuchitha okuningi ku amahhotela ezibizayo ke njengokukhethwa kukho efanelekayo ukuze uhlale lwaseTurkey nikeza sicabangele amane "Kemer Botanic kuyona."
Leli hhotela itholakala Antalya (Turkey), ogwini Mediterranean. Ibanga ukusuka enkabeni lingu-1 km. Esikhumulweni sezindiza esiseduzane itholakala Antalya, km 55 kusukela ehhotela.
Botanik kemer Resort Ihhotela 4 *: izithombe, incazelo
Leli hhotela usemncane kakhulu. Ngakho, ngokokuqala ngqa izicabha zalo izivakashi, wavula ngo-2014. Le ndawo endaweni yehhotela ngokwayo obuyizinkulungwane 6 sq. M. m. Ezezindlu Isikhwama storeys ise izindlu, kanye Bungalows eziningana. Zonke amakamelo ehhotela, futhi bangabenzi 101, kukhona standard. amafulethi eziningana ahlomele izivakashi ekhubazekile ukhululekile. Zonke amakamelo anesitayela ehlotshisiwe futhi ifakwe ifenisha entsha ukhululekile. Ngaphezu kwalokho, kukhona i-TV neziteshi ezintathu ngesiRashiya, air conditioning, ngocingo, yokugezela, mini-bar. Amakamelo ezibheke pool, ingadi noma ulwandle. Amakamelo bahlanza nsukuzonke. Lelineni amathawula nezincekukazi ishintsha katsatfu ngeliviki. wonke Ihhotela likwazi ukufinyelela inthanethi wireless.
Ezokudla ehhotela kwenziwa i "zonke okufakayo". Ngakho, izikhathi ezintathu ngosuku, izivakashi adle endaweni yokudlela ehhotela. Ngaphezu kwalokho, emini nawe ungadla ukudla okusheshayo.
Ensimini ka "Kemer Botanik kuyona" izici i-swimming pool, izinkantolo yezemidlalo, ejimini, spa, ebaleni lokudlala zezingane, esitolo nokuningi. Futhi ukusebenza izithombe ithimba usixoxela izivakashi ekuseni kakhulu kuze kube sebusuku.
Ihhotela has a beach yangasese elise ngaphesheya komgwaqo. Kukhona imibhede, omatilasi, ilanga izambulela. Ngesikhathi sebehlezi ogwini nge bar. Iziphuzo ekulo ahlinzekwa ngenkokhelo isisekelo. Futhi ogwini ungadlala volleyball namanzi ezemidlalo.
Botanik kuyona kemer Ihhotela 4 * (Kemer): izibuyekezo Russia
abahambi Modern ozama ngokucophelela ukuze asondele inqubo yokukhetha ehhotela kokubili ekhaya aphesheya. Ngakho, abagcinanga bafunde ukwaziswa olusemthethweni futhi banesithakazelo iseluleko tour opharetha, kodwa futhi ukufunda Izibuyekezo zabantu asebethole kwadingeka isikhathi ukuvakashela endaweni ethile. Ngokusebenzisa le ndlela, isamba is closer kuze ngokoqobo umbono walokho uzobe elinde wena phakathi iholidi lakho. Phela, akekho ofuna ukuzwa ukuphoxeka ezingemnandi ngokuya iholide eside elindelwe. Ngakho sanquma ukuphungula ezinye inkinga futhi ukukunikeza ngijwayele amazwana generalized ezakhamizi zethu nabo, muva iholidi baye ngesikhathi "Kemer Botanic kuyona." Lapho ubheka ikusasa, siphawula ukuthi iningi izivakashi basutha nge choice eyenziwe. Bona wazi ukuthi ihhotela ngokuvumelana esigabeni sayo nokubaluleka. Manje siyathola imininingwane.
Kuhlala ekhatsi Kemer Botanik kuyona labanika Ihhotela 4 * (Turkey, Kemer) izakhamuzi zethu nabo, nahlulele by izimpendulo zabo, basutha kakhulu. Ngakho, abantu bethu bathi amakamelo kukhona ivulekile kakhulu, elikhanyayo, Tastefully ahlotshiswa. Thina ngokushesha ubone ukuthi hhotela entsha. Mina yamjabulisa design eziningi ezithakazelisayo. Egumbini elilodwa, ngokuvumelana abahambi, it has konke okudingayo: futhi ifenisha ukhululekile futhi zesimanje ezenza, kanye nekamelo lokugezela ivulekile futhi kuvulandi nge nombono nice. Ikhwalithi yokuhlanza uthi izivakashi ehhotela kungukuthi uzwakalise. Ngokusho kwabo, izintombi zasemizini zonke izinsuku. Amathawula nelineni emakamelweni lashintsha izikhathi eziningana ngesonto. Ngaphezu kwalokho, eziningi izivakashi emazwini abo ziyajabula uqaphele ukuthi cishe yonke indawo ye hhotela "lokubanjwa ezinhle»-Wi-Fi, okuyinto iphuzu elibalulekile ngoba iningi lezihambi lanamuhla.
Indawo yokudlela futhi ibha
Ngokuphathelene nokudla, lo mbuzo cishe njalo kubangela eziningi impikiswano phakathi izakhamizi ezihlukahlukene amahhotela kuzo zombili Turkey nakwamanye amazwe. Ayikwazi ukuphuma kuleso ukudalelwa, futhi sisuke sicabanga ehhotela Kemer Botanik Resort Ihhotela 4 * (Kemer). Ngakho, izivakashi emazwini abo bathi ukudla leli hhotela futhi izinga noma ahlukahlukene ikakhulukazi. Nokho, iningi qiniseka ukuthi empeleni akulona icala. Ngokusho kwabo, izivakashi engajabule mhlawumbe ngaphambi nje kokuba kube ukuba ezibizayo - emahhotela aphambili. izivakashi eziningi uqiniseka ukuthi amandla ungaphakathi "Kemer Botanik kuyona" liyalingana isigaba bese izindleko ehhotela. Ngokusho kwabo, njalo imenyu izitsha izinhlanzi, inyama, yenkukhu, amasaladi, ukudla okulula, amaswidi, izithelo fresh. Nokho, ukushiyeka eziningi izivakashi wathatha yokuthi amatafula izitsha yokudlela ngaphandle zingavumi kakhulu. Ngakho-ke, lapho kwezivakashi zivame kwakhiwa emigqeni, okuyinto besingagwemeka nge amatafula kancane ezahlukene ngaphandle. Ezinye izakhamuzi zethu nabo baye bazwakalisa lezi abaphathi ukukhathazeka edilini lomshado ngethemba lokuthi lolu lwazi kuyofinyelela umphathi wehhotela, futhi isimo zizoshintsha zibe ngcono. Ezinye izindaba zika-umsebenzi e-restaurant izivakashi iningi lase lingenamali izikhalazo.
Iningi izivakashi ukubuyekeza kwabo bathi Botanik kuyona Kemer Ihhotela 4 * (Turkey, Kemer) unazo yayo limnandi ebhishi ngesikhathi. Nokho, endleleni eya kubalulekile ukuba kudlule ambalwa engamakhulu amamitha endleleni. Ngesicelo izakhamuzi zethu nabo, kusekhona kungekho eceleni komgwaqo, ngakho baye ngebhayisikili ingxenye yomgwaqo ebekelwe izimoto, engesiyo ephephile kakhulu. Nokho, njengoba waqinisekisa abasebenzi ehhotela, ngonyaka ozayo kuyoba phansi eceleni komgwaqo, ukuze abavakashi esizayo sikhathazeke. Kepha ebhishi, kuba itshana, mikhulu, nge entry mnene olwandle. Kukhona ibha kodwa iziphuzo kakhulu kukhona ekhokhwayo. Ngesikhathi sebehlezi ogwini kukhona kokwanele ka ukhululekile ilanga loungers kanye baphathe nezambulela. By the way, izivakashi baxwayisa ukuthi lolwandle amathawula ayatholakala for imali eyengeziwe. Ngakho uma ufuna ukulondoloza ke ubambe kubo ekhaya noma ukuthenga efika Turkey kwelinye izitolo eziningi.
Inani bakithi in the imibono ukubalula ukuthi ebhishi ehhotela akubi kuhlanzeke kakhulu. Kodwa Angazi ugxeka abasebenzi ophethe wokuhlanza ogwini futhi yizivakashi ezibuka amazwe, ngokuvamile ukwenza usamkhathaza ngokwabo ukuphonsa izinqamu zikagwayi, izinkomishi ezingenalutho namanye kudoti etholakalayo lapha inani elanele isitsha.
Ngaphezu iholidi beach, izivakashi Kemer Botanik Resort Ihhotela 4 * ungaba nesikhathi esihle futhi kwamakhasimende eza ehhotela. Ngakho, lapha kukhona ichibi lokubhukuda kanye ilanga ithala. Eceleni ibha nge Ukukhetha enkulu iziphuzo yonke ukunambitheka. Futhi itholakala esizeni anemisila izinkantolo ezemidlalo, ejimini. Emini, izivakashi ukujabulisa izithombe iqembu. Ukuvivinya umzimba ngendlela Ngakho, izivakashi ahlinzekwa, yoga, volleyball, ithenisi, amabhiliyade. Ngezikhathi zakusihlwa, izivakashi i show ukuzijabulisa. Ngemva kwabo kulo iviyo Animators angaya omunye amakilabhu ka Kemer.
Ngokuqondene abasebenzi ehhotela ezine inkanyezi "Kemer Botanik kuyona", ngokuvumelana ukubuyekezwa, izakhamuzi zethu nabo babejabula ngempela nabo. Ngakho, ngokuvumelana kubo, izisebenzi uyayinaka abhekana ngayo imisebenzi yalo, friendly. abasebenzi abaningi bakhulume isiRashiya, ngakho awunankinga zokuxhumana wena ungekho.
Ihhotela "Atlas", Adler: ngezibuyekezo nezithombe
"Yohlobo lweToyota Hilux Surf" - isivakashi yelanga eliphumayo